भोलिको उज्वल भविष्यको सपना देखेका विद्यार्थीलाई सहि गोरेटो प्रदान गरिरहेका छौं – सिंखडा – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
भोलिको उज्वल भविष्यको सपना देखेका विद्यार्थीलाई सहि गोरेटो प्रदान गरिरहेका छौं – सिंखडा
पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीलाई केहि समस्या आयो, खासमा समस्या के थियो ?
त्यसरी भनि हाल्न मिल्दैन, लामो समयदेखि यो ब्यवसायमा आहुती दिएकाहरुको ठूलो योगदान छ । विकशित देशलाई नेपाली बजारमा ल्याउन जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिएको छ त्यो चानचुने संघर्षबाट भएको छैन ।
यसका तीन/चार वटा कारण छन् । अरुको देखासिकी, पारिवारिक, आर्थिक अवस्था, अभिभावकको करकापले विद्यार्थीमा विदेशप्रतिको मोह छ । सँगै हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाले पनि प्रभाव पारेको छ । विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयका कलेज र विश्वविद्यालय नेपालमा कठिन रुपमा प्राप्त हुन्छन् ।
प्रयोगात्मक शिक्षण विधि एकदमै कम छ । पढिसकेपछि उचित रोजगारी र अवसर पनि नभएकोले केहि समय विदेश गएर उच्च शिक्षा हासिल गरुँ, हातमा सिप र सर्टिफिकेट लिएर भविष्य सुरक्षित गरुँ भन्ने सोचले पनि विद्यार्थी विदेश गएका छन् ।
विज्ञान र प्रविधिको युगमा इतिहास र पौराणिक विषयमात्र अध्ययन गर्दा विद्यार्थीले कसरी विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ?
तपाईले भन्न खोज्नु भएको नेपालको शिक्षा ठिक भएन, त्यहि भएर विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जानुपर्छ ?
मेरो बाबु, काकाले जुन विषय पढ्नु भयो अहिले हामीले त्यहि परिवेशको विषय पढिरहेका छौं । भन्नुको मतलब, हाम्रो शिक्षा समय अनुसार परिस्कृत भएन ।
आइटी, म्यानेजमेण्ट, नर्सिङ्ग, इन्जिनियरिङ्ग, एभिएसन हरेक विषय नेपालका लागि आवश्यक छ ।
एजुकेसन पार्कले अभिभावकलाई परामर्श दिदै